Waxay umuuqataa in tijaabada gulukooska ee Apple ay tahay mid halis ah | Waxaan ka socdaa mac
Waxay u muuqataa in tijaabada gulukooska ee Apple ay tahay mid halis ah
Patent cusub oo ka soo baxay Apple ayaa muujinaya in nidaamka la socodka sonkorta dhiiggu uusan ahayn maqal oo keliya. Waxay umuuqataa inay runti kashaqeynayaan inkasta oo aan hubno inaysan sahlanaan doonin dhammaan dadkan u baahan inay hubiyaan heerka gulukoosta maalin kasta waxay heli kareen bedel aad u wanaagsan.
Runtu waxay tahay in shatiyaduhu noqon karin barta wax ka badalashada Apple waxna ka yar marka loo eego rukhsadda "xitaa hawada aad neefsato" laakiin dabcan shatigan cusub ee ay daabacday Apple Insider waxay bedeli kartaa nolosheena in laga hirgaliyo saacad caqli badan oo ka socota shirkada Cupertino.
Patentku wuxuu ka hadlayaa mitir aan duullaan lahayn
Waxaa muhiim ah in la ogaado in howlaha intiisa kale aysan saameyn ku yeelan karin tan sidaas darteedna ay caqabad weyn ku tahay dhammaan injineerada Apple inay gaaraan. Xaaladdan oo kale, waa inay ku sameeyaan shucaaca elektromagnetic elektronik. Si fudud loo sharaxay waxay noqon laheyd nooc ka mid ah mawjadaha elektromagnetic-ka ah ee awood u yeelan doona inuu muujiyo heerka gulukooska ee dhiigga ku mahadsan nuugista nudaha.
Waxay u egtahay mid murugsan waana Ma awoodi karno oo waa inaannaan ku hoos dhicin wax khayaali ah oo ku saabsan shatigan cusub maaddaama oo ay aad u fog tahay, laakiin haddii lagu hirgelin karo Apple Watch, ma aha oo kaliya inay u adeegto in lagu ogaado heerarka gulukoosta, sidoo kale waxay awoodi doontaa inay ogaato xaaladaha kale ee maqaarka.
Waxay umuuqataa taasi Apple waxay dhab ka tahay hirgelinta muuqaalkan Iyo inkasta oo ay tahay kaliya patent, waxaan rajeyneynaa in tani ay tahay mid ka mid ah kuwa aad ugu dambeyntii ku aragto si dhab ah qalabka Apple. Shaki la'aan waxay ahaan laheyd horumar layaableh waxayna iska ilaalin doontaa in lagu sameeyo dalool ama abuurida dareemayaal subcutaneous (sida kan horeyba loo isticmaalay maanta) si loo cabiro qiimahan muhiimka u ah dadka qaba sonkorowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Waxay u muuqataa in tijaabada gulukooska ee Apple ay tahay mid halis ah
Apple waxay la wareegtay xuquuqda filimkii Dolly ee ay jileysay Florence Pugh
Khariidadaha Apple ayaa ku dari doona macluumaadka kamaradaha xawaaraha, shilalka iyo saxmada taraafikada